एक्सल तुआनजेब बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू एक्सल तुआनजेब बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो एक्सल तुआन्जेबी जीवनीले तपाईंलाई बाल्यावस्थाको कथा, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको तथ्य बताउँछ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी तपाईंलाई एक्सल तुआन्जेबीको पूर्ण जीवन कथा प्रस्तुत गर्दछौं- उहाँ शुरुआती दिनहरूदेखि जब उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। उसको जीवनीको सारांश हेरौं किनकि यसले उसको सुन्दर कहानी भन्छ।
हो, हामी यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं कि अक्सेल टुन्जेबीले अक्टोबर २०२० मा PSG बिरुद्धको च्याम्पियन्स लिगको खेलमा आफूलाई प्रोफेसिफिक प्रोफेसरको रूपमा प्रमाणित गर्‍यो।
निस्सन्देह, हामी भविष्यमा उहाँबाट राम्रो प्रदर्शन हेर्नको लागि तत्पर छौं। प्रशंसा को बावजुद, धेरै फुटबल प्रशंसकहरु लाई उनको जीवन कथा को बारे मा कम ज्ञान छ, जुन एकदम चाखलाग्दो छ। धेरै भने बिना, सुरु गरौं।
एक्सल तुआन्जेब बाल्यकाल कहानी:
सुरू गर्दै, एक्सेल तुआन्जेबी नोभेम्बर १ 14 1997 of को १th तारिखमा उनको आमाबुबाको लागि बुनिया, डीआर कo्गोमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्ना बुबा र आमा बीचको मिलनबाट जन्मेका तीन बच्चाहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ।
उनको जन्म पछि, जवान केटा र उनको परिवार बेलायत सर्नु अघि केवल चार बर्षको लागि डीआर कo्गोमा बसे। त्यतिखेर सानो तुआन्जेबीलाई उनको देशको संस्कृतिसँग परिचित हुन पर्याप्त समय लागेन, जुन पहिलो र दोस्रो कo्गो युद्धले ध्वस्त पारेको थियो।
यद्यपि उनले युनाइटेड किंगडममा हुर्काएको राम्रो परिणाम देखा पर्यो किनकि उनले चाँडै नै फुटबलमा चासो लिन थाले। निस्सन्देह, उहाँ खेलमा डुल्नु भएको पहिलो क्षणबाट नै उहाँमा राम्रो थियो।
Axel Tuanzebe परिवार पृष्ठभूमि:
कole्गोलिस खेलाडी एउटा सम्पन्न परिवारमा हुर्कियो जुन यसको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्थ्यो। त्यसकारण उनका बुबा र आमाले अफ्रिकाबाट युरोपमा प्रायोजन गर्न सक्नुभएन। तुआनजेबीको शुरुका दिनहरूदेखि नै, तिनका आमा बुबाले प्रायजसो उनका सपनाहरू र आकांक्षाहरूलाई समर्थन गर्नुभयो। त्यसकारण, फुटबलमा डुल्नु भन्ने उनको छनौटले उसको परिवारमा कुनै आपत्ति जनाएन।
Axel Tuanzebe परिवार मूल:
जे भए पनि ऊ घरबाट कत्ति टाढा भए पनि प्रशंसक आफ्नो जरा कहिल्यै भुल्दैन। वास्तवमा भन्ने हो भने उसको छालाको र color उनको अफ्रिकी वंशको प्रमाण हो।
यो कुनै समाचार छैन कि तुआन्जेबी डीआर कo्गोको इटुरी प्रान्तको राजधानी बुनियाको हो। यद्यपि उसको गृहनगर विगतमा दुखद घटनाहरूको एक श्रृंखला रेकर्ड गरियो। तिमीलाई थाहा छ? ... बानिया त्यो मुख्य दृश्य थियो जहाँ १ 1998 XNUMX in मा शुरू भएको दोस्रो कo्गो युद्धमा धेरै हत्या र लडाईहरू भएका थिए।
एक्सल तुआनजेब क्यारियर कहानी:
उनको परिवार बेलायत आइपुगे पछि, तिनीहरू चाँडै देशको जीवन शैलीमा समायोजित भए। कुनै ढिलाइ नगरी, एक्सेलका अभिभावकहरूले उनलाई रोचडेलको सेन्ट कुथबर्टको आरसी हाई स्कूलमा अध्ययन गर्न भर्ना गरे।
स्कूलमा हुँदा, Tuanzebe सबै प्रकारका खेलमा भाग लिए। उसको उत्कृष्ट खेलकुदताको कारण, उनी आफ्नो स्कूल वर्ष football फुटबल टीमको कप्तान नियुक्त भए। तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न! उनले २०० team मा स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा भएको इ National्लिस नेश्नल स्कूल कपको फाइनलमा आफ्नो टीमको नेतृत्व गरे।
Axel Tuanzebe प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
स्कूलमा पढ्नको लागि भर्ना गर्नाले युवा कole्गोलिसहरुलाई फुटबल एकेडेमीमा जानबाट रोकेन। अन्दाज गर्नुहोस्? टुन्जेबी म्यानचेस्टर युनाइटेड एकेडेमीमा joined वर्ष पुगेका थिए। निस्सन्देह, उसलाई थाहा थियो कि उनले क्लबमा प्रतिष्ठान पाउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
बिस्तारै, जवान केटाले एकेडेमीमा आफ्नो फुटबल क्षमतामा सुधार गरे। वर्ष २०१ 2014 मा उनले म्यानचेस्टर युनाइटेड युवा टीमको नेतृत्व गरे जसले मिल्क कप जित्यो। पछि, उसले २०१ 2015 मा जिमी मर्फी यंग प्लेयर अफ द ईयरको पुरस्कार जित्यो।
एक्सल तुआनजेब रोड फेम कथा:
कole्गोलिस चाँडै युनाइटेडका युवा खेलाडीहरूको समूहमा उत्रियो किनकि उसले एक महान फुटबल शक्ति प्रदर्शन गर्दछ। तसर्थ, उनले अंग्रेजी २०१ for को जनवरी २०१ 29 को २ W तारिखमा विगन एथलेटिक बिरूद्ध -2017-० एफए कपको जीतमा पेशेवर क्लबको शुरुआत गरे।
के तपाईंलाई थाहा छ?… Axel Tuanzebe को सफलता को लगभग चार महिना अघि म्यान युनाइटेड को वरिष्ठ टीममा बढुवा गरियो मार्कस राशफोर्ड 2016 मा।
जनवरी २०१ 2018 मा, Axel Tuanzebe loanण मा पठाइएको थियो एस्टन भिल्ला संग बाँकी Villaतु पूरा गर्न। यद्यपि उनले गम्भीर चोटपटक भोग्नु परेको छ जसले विलाका लागि उनको प्रदर्शन सीमित गर्यो। तसर्थ, उसले २०१-2017-१ season सत्रको अन्त्यमा एस्टन भिल्लाका लागि केवल पाँच पटक प्रदर्शन गर्‍यो।
एक्सल तुआनजे सफलता सफलता:
अगस्त २०१ 2018 मा म्यान युनाइटेडमा फर्किए पछि उनी २०१ Ast-१-2018 सिजनको लागि एस्टोन भिलामा edण लिइएको थियो। तसर्थ, उनले एस्टोन भिल्लालाई EFL च्याम्पियनशिप जित्न मद्दत गरे, जुन उनीहरूलाई २०१ in मा प्रिमियर लिगमा प्रमोट गरियो।
तुआन्जेबीले चाँडै म्यानचेस्टर युनाइटेडमा फर्किए र जुलाई २०१ in मा अंग्रेजी क्लबसँग तीन वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अझ के के छ? अनुपस्थितिमा उनले एक बचाव भूमिका खेल्थे हैरी माग्इयर युनाइटेड २०२०-२१ मा PSG बिरूद्धको च्याम्पियन्स लिग खेलमा।
हो, रोक्नको लागि उहाँको क्षमता किलियन एमपीपी र नेमार म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि उनलाई प्रशंसकको रूपमा स्थापित गरेको छ। के तपाईंलाई थाहा छ?… तुवेन्बे सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी हुन् नर्मन ह्वाइटसाइडले कप्तान युनाइटेड कप्तान युनाइटेड इएफएल कपको जीतको दौरान। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
एक्सेल टुन्जेब गर्लफ्रेंड को हो?
निश्चित हुनुहोस् कि कole्गोलिय प्लेयर जत्तिकै गोप्य छ जाफेत तान्anga्गा सम्बन्ध मुद्दाहरूमा। यद्यपि उनले यस तथ्यलाई लुकाउन सक्दैनन् कि उहाँ भव्य महिला साथीहरूले मोहित हुनुभएको छ जसले आफ्नो सम्भावित प्रेमिका वा पत्नीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ।
तपाईंलाई सत्य कुरा भन्नुको लागि, Tuanzebe केवल यो बायो लेख्ने बेलामा उसको क्यारियर सफलतामा उसको दिमाग स्थिर भयो। तैपनि, उनको कडा परिश्रम र सफलताको लागि दृढताले प्रमाणित गर्दछ कि उहाँ आफ्नो भावी पत्नी र बच्चाहरूलाई अझ राम्रो जीवन दिने दिशामा काम गर्दै हुनुहुन्छ।
Axel Tuanzebe व्यक्तिगत जीवन:
Axel Tuanzebe बाक्लो के हुन्छ? सुरुमा, उहाँको व्यक्तित्व वृश्चिक राशिको गुणको मिश्रण हो। उहाँ धेरै हेरचाह र अत्यधिक संवेदनशील हुनुहुन्छ। साथै, Tuanzebe आफ्नो क्यारियर मा सफल एक ठूलो दृढ संकल्प देखाएको छ।
के तपाईंलाई थाहा छ?… Axel Tuanzebe बक्सिंग र कुश्ती मा गहन चासो छ। वास्तवमा, उसले सायद बक्सि intoमा लगेको हुन सक्छ यदि उसले कहिल्यै फुटबलमा उत्रिन सकेन। तल भिडियो क्लिपमा उसले कसरी आफ्नो व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यान्वयन गर्दछ हेर्नुहोस्।
एक्सल तुआन्जेबी जीवनशैली:
यद्यपि एक्सेल यत्तिकै धनी होइन Michy Batshuayi, उहाँ एक विलासी जीवन शैली बाँच्न सक्छ। त्यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि उसले एक विदेशी मर्सिडीज बेन्ज किन्नुभयो (तल देखाइएको छ) जब उहाँ केवल १teen वर्षको हुनुहुन्थ्यो।
निस्सन्देह, हामी यस तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौं कि उसले अन्य महँगो सम्पत्तिहरू किन्नेछ। यद्यपि उनले आफ्नो सामाजिक मिडियामा यस बायोको लेखनमा आफ्नो घर र अन्य विदेशी कारहरू देखाउन प्रयोग गरेका छैनन्।
२०१ in मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि, एक्सेल तुआन्जेबीको नेट वर्थ बढेर £ २.२ मिलियनको अनुमानित रकममा पुगे। जे होस् उसले £ £2019,००० को वार्षिक तलब पायो, हामी विश्वस्त छौं कि उहाँ क्लबमा रहुन्जेल उसको आम्दानी सुधार हुनेछ।
Axel Tuanzebe पारिवारिक जीवन:
उसको परिवारलाई धन्यवाद, प्रशंसनीय डिफेन्डरले एकाकीपनको जीवन गुमाएको छ। तसर्थ, हामी तपाईंलाई उसको परिवारको प्रत्येक सदस्यको बारेमा विस्तृत जानकारीको एक टुक्रा प्रस्तुत गर्दछौं।
एक्सल तुआन्जेबी फादरको बारेमा:
र सबैभन्दा पहिला, Tuanzebe बुबा एक जुडो प्रशिक्षक जस्तो हुन सक्दैन Youri Tielemans'बुबा। यद्यपि उनले खेलकूदमा ठूलो चासो देखाएको छ। त्यसकारण उनका बुबाले उनको फुटबलमा बढी प्रदर्शन गर्न म्यान युनाइटेड एकेडेमीमा भर्ना गरे। भनिएको छ, हामी सुरक्षित रूपमा उसको बुबा आफ्नो क्यारियर जीवन को एक आधार हो कि कम गर्न सक्नुहुन्छ।
एक्सल तुआन्जेबी आमाको बारेमा:
उनको पालनपोषणमा उनको आमाको भूमिकालाई कहिले पनि बढाइएको हुँदैन। अफ्रिकी आमाहरूका लागि आफ्ना बच्चाहरूलाई उचित नैतिक नैतिकतामा हुर्काउने चलन छ, त्यस्तै तुआन्जेबीकी आमाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे। उनको अभिभावकीय स्नेहको लागि धन्यवाद, Tuanzebe दयालु जवान मानिस बन्न सक्षम भयो।
एक्सल तुआन्जेबी बहिनीहरूको बारेमा:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, कole्गोलियस प्लेयरको दिमित्री नामको जेठो दाइ छ, र एक बहिनी नाडेज भनेर चिनिन्छ। के तिमीलाई थाहा छ?… तल चित्रित डिफेन्डरको बहिनीले उनको फेशन लाइनको स्वामित्व लिईन् जबकि उनका भाई फुटबल खेल्छन्।
के अनुमान गर्नुहुन्छ? ... तुआन्जेबी दिदी एक उत्कृष्ट नर्तक हुन्। उनको एक भिडियोको सोशल मीडियामा अपलोड गरिएको प्रतिक्रियाको आधारमा, यस्तो देखिन्छ कि कole्गोलियाली डिफेन्डर नाच पनि गर्न सक्छ। उनी तलको भिडियोमा कसरी राम्ररी नाच्छिन् हेर्नुहोस्।
एक्सल तुआनजेबी सम्बन्धका बारे:
ऊ प्रख्यात भएदेखि उसको हजुरबुबा र हजुरआमाको बारेमा कुनै जानकारी छैन। साथै, यदि उसले अन्य कांगोली खेलाडीहरूसँग पारिवारिक बन्धन साझा गर्दछ भने हामी अनुमान गर्न सक्दैनौं टान्गु Ndombele किनभने उनका आफन्तहरू अज्ञात छन्।
Axel Tuanzebe अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो एक्सल Tuanzebe लाइफ स्टोरी गोल गर्न, यहाँ केहि अज्ञात तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उसको जीवनीको पूरा ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: उनले गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड तोडे:
तपाइले जान्न उत्सुक हुनुपर्दछ कि कसरी ट्वान्जेबे प्रतिभावान छ किनकि उसले गिनी विश्व रेकर्ड तोड्यो। सत्य यो हो कि, जुलाई २०१ in मा, कole्गोलियस खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा हंगेरी हंग्री हिप्पोसको खेल खाली गरेको छ जुन सबैभन्दा छोटो अवधिमा विश्वमा रेकर्ड गरिएको थियो। आकर्षक, सही? मात्र थाहा छ कि ऊ विशेष क्षमताहरु को धेरै भरिएको छ।
तथ्य # १: तलब ब्रेकडाउन र प्रति सेकेन्डको आय:
तलको तालिकाले यो जीवनी लेख्दा म्यानचेस्टर युनाइटेडमा तुआन्जेबीको कमाईको विस्तृत विश्लेषण दिन्छ।
प्रति वर्ष £ 545,590
प्रति महिना £ 45,466
प्रति हप्ता £ 10,476
प्रति दिन £ 1,497
प्रति घण्टा £ 62
प्रति मिनेट £ 1.04
हामीले रणनीतिक हिसाबले एक्सेल तुआनजेबीको कमाईको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राखेका छौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै आयो भनेर खोज्नुहोस्।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो Axel Tuanzebe को बायो, यो उसले कमाएको छ।
तथ्य # १: अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियर:
विभिन्न क्लबहरूमा उनको फुटबल अभियान बाहेक, कole्गोलियसले पनि इ England्ल्यान्डका लागि केही प्रदर्शन गरे। अचम्मित हुनुभयो? डीआर कo्गोको लागि खेल्नुको सट्टा, तुआन्जेबीले विभिन्न अ international्ग्रेजी टुर्नामेन्टमा अ U्ग्रेजी यु १ 19, अण्डर -२० र यु -११ टिममा भाग लिन छनौट गरे। ठीक छ, DR कंगो भविष्यमा आउन सक्छ आफ्नो सेवाहरु को लागी समाप्त हुन सक्छ।
तथ्य # १: फिफा तथ्या :्क:
तल देखाइएको उसको प्रोफाइल विश्लेषणबाट, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि ट्युन्जेबे जत्तिकै बचावमा झुकाएको छ एरोन वान बिसाका। यद्यपि उसको फुटबलको अन्य क्षेत्रहरुमा राम्रो आँकडा छ, कole्गोलिस पछिल्लो बल बाट ह्यान्डल गर्न अझ राम्रो छ। मनपर्‍यो Amad Diallo, उसको सम्भावितले देखाउँदछ कि ऊसँग केहि भन्दा पनि अझ धेरै चीजहरू छन् जुन हामी यस क्षणमा हेर्छौं।
अन्तमा, Tuanzebe निलो बाहिर प्रसिद्ध हुन सकेन। बरु, उहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन राख्न थोरै अवसरको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै अचम्म छैन कि उसले प्रभाव पार्न सकेको थियो Ole Gunnar Solskjaer अक्टोबर २०२० मा PSG बिरूद्ध युनाइटेडको २-१ ले जितेको।
साथै, उनका आमाबुबाले उनीहरूलाई युद्दग्रस्त क्षेत्रबाट हटाउने प्रयास प्रशंसनीय छ। म पक्का छु कि टुन्जेबे र उनका भाइबहिनीहरू उनीहरूका बुबा र आमाप्रति आभारी छन् कि उनीहरूले युद्धका दु: खहरूबाट बचाए।
हाम्रो Tuanzebe जीवनी र अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँ केहि लेख फेला पार्नुभयो जुन हाम्रो लेखमा सही देखिदैन। साथै, तपाईले यु ट्युनेजबीको भविष्यका बारे के सोच्नुहुन्छ भन्नेमा म्यान युनाइटेडका साथ कमेन्ट गर्नुहोस्।
पुरा नाम: एक्सेल तुआन्जेबी
निक नाम: Zubee
जन्म मिति: 14th नोभेम्बर 1997
जन्मस्थान: Bunia, DR कांगो
Siblings: दिमित्री (जेठो भाई) र नाडेग (बहिनी)
नेट मूल्य: पाउन्ड 2.2 मिलियन
वार्षिक वेतन: £ 545,000
उचाइ: १.1.85 मी (f फिट १ इन्च)
एस्टन भिल्ला फुटबल डायरी
Amad Diallo बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
मेसन ग्रीनवुड बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
ल्यूक श बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
Donny van de Beek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 8
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 1